» भुलेर पनि नखानुस् सुपारी, निम्तिन सक्छ यी रोगहरु
१५ फागुन २०७६, बिहिबार
प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने
वाग्मती प्रदेशसभामा ‘बर्थडे’ बहस : ‘प्रधानमन्त्रीको परिवार पुँजीवादसँग जोडिएको छ’
सुनसान बन्दै ठमेलः ७५ प्रतिशत होटल बुकिङ रद्द
हेटौंडा–अमलेखगन्ज सुरुङमार्ग ६० वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
हेर्नुहोस आज वि.सं. २०७६ फागुन १३ गते मंगलबारको राशिफल
भुलेर पनि नखानुस् सुपारी, निम्तिन सक्छ यी रोगहरु
३ माघ २०७६, शुक्रबार १९:०३
खाना खाएपछि सुपारी चपाउने बानी प्राय जसोको हुन सक्छ । सुपारी मात्र नभएर सुपारीबाट बनेका कुराहरू गुट्का, पराग, मधु आदि सेवन गर्ने धेरेको बानी हुन्छ । मानिसले थाहा पाएर होस् या नपाएर यसको सेवन गरिरहेका हुन्छन् ।
मानिसमा सुपारीले खाना पचाउँछ भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । तर, सुपारीको सेवन स्वास्थ्यको लागि त्यति राम्रो भने मानिँदैन । यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्याहरू ल्याउने गर्छ । यसले पुर्याउने नोक्शानको बारेमा थाहा नभएको कारण मानिसहरूमा यस्ता भ्रमहरू हुने गर्छन् ।
सुपारीको प्रयोगले हामीलाई धेरै असर पर्न सक्छ । सुपारीको सेवनले दाँतको समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसको सेवनले दाँतको जरामा विभिन्न खालका समस्याहरू आउने गर्छन् । नियमित रूपमा सुपारी चपाउने गरेमा दाँत खिइने मात्र नभएर हाम्रो दाँत कमजोर हुँदै जान्छ ।
सुपारी खाँदा क्यान्सर पनि हुन सक्छ । अत्यधिक मात्रामा सुपारीको सेवन गर्नाले हामीलाई मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सुपारी सेवनको कारण मुखको क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । यस्तै यसको सेवनले मुटु रोग निम्त्याउन सक्छ । सुपारीको अत्यधिक सेवनले मोटोपना बढाउँछ । जसले हाम्रो शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँछ ।
सुपारीको सेवनले हाम्रो मुटुमा नकारात्मक असर पुर्याउने गर्छ । मुटुमा समस्या आउनुको एउटा कारण सुपारी सेवन पनि रहेको छ । हामीले प्रयोग गर्ने औषधिले कहिलेकाहि काम नगरेको अनुभव गरेका छौं होला, यदि सुपारीको बढी प्रयोग गरेको अवस्थामा अन्य औषधि तथा हर्वलसित मिसिएमा यसले शरीरमा रसायनिक प्रतिक्रिया जनाउँछ ।
निरन्तर सुपारीको प्रयोगले शरीरमा लत लगाउनुका साथै यसको बानी पार्छ, जुन छोड्नसमेत गाह्रो हुन्छ । त्यसैले चिकित्सकहरू सुपारी नखाने सल्लाह दिने गर्छन् । एजेन्सी
सामाजिक सञ्जालमा हंगामा मच्चाउँदै कोरोना बियर
कोरोना भाइरसबाट जोगिन ‘नमस्ते’ गर्नुहोस्
के हो कोरोना भाइरस ? चीनदेखि अमेरिकासम्म, नेपालमा पनि त्रास
के कारणले चिलाउँछ यौनाङ्ग ?
हिटर ताप्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ! जान सक्छ ज्यान
सफल हुन शास्त्रमा भएका चार नीति